Jumlada 4.5mm jibbaaran oo aan la simbiriirixan gujin sagxadda vinylalkohol Spc-2 Manufacturer and Supplier | Moyo
4.5mm oo aan siibasho lahayn guji sagxadda vinyl Spc-2
Gogosha vinyl -ka raaxada leh ee udub -dhexaadka ah, oo sidoo kale loo yaqaan sagxadda SPC, ayaa ah ikhtiyaarka sagxadda vinylalkohol ee ugu adkaysi badan suuqa. Waad taqaanaa sida vinylku ugu caan baxay dabacsanaan iyo yaraanta ...
Gogosha vinyl -ka raaxada leh ee udub -dhexaadka ah, oo sidoo kale loo yaqaan sagxadda SPC, ayaa ah ikhtiyaarka sagxadda vinylalkohol ee ugu adkaysi badan suuqa.
Ma taqaan sida vinylku ugu caan baxay dabacsanaan iyo ka adkaysi badan alwaax dhaqameedka ama dahaarka? Hagaag, vinyl WPC waa mid aad u adag, laakiin SPC sagxadda vinyl ee qaaska ah ee adag waa sida istaagida shubka.
Dabaqan yar, dhuuban ayaa laga yaabaa inuu u muuqdo mid aan wax badan ka soo qaadin, laakiin waa kan ugu adag, oo si gaar ah loogu talagalay inuu iska caabbiyo isticmaalka iyo ku xadgudubka bay'adaha ganacsiga.
Sida WPC, SPC sagxadda vinylalkohol ee udub -dhexaadka ah ayaa ah meesha ugu sarraysa ee ma aha oo kaliya wax -qabad laakiin waxay kaloo eegtaa, sidoo kale. Iyada oo leh vinyl udub-dhexaad ah oo adag, waxaad ku arki doontaa dhammaan alwaaxyada ugu kulul iyo dhagaxa-muuqaalka muuqaalka iyo midabada ku jira looxyo iyo tirooyin lagu qanci karo.
SPC sagxadda vinylalkohol ee qaaska ah ee caadiga ah waxay ka kooban tahay 4 lakab.*
Waxay ku kala duwanaan kartaa soo -saarayaasha.
Lakabka Taageerada: Kani waa laf -dhabarta looxaaga.
SPC Core: Tani waa soo jiidashada ugu weyn! Dabaqa SPC wuxuu ka kooban yahay udub dhexaad WPC oo aan biyuhu lahayn. Ma dillaaci doono, ma barari doono mana diiri doono wax kasta oo dareere ah oo aad u hoggaansamayso. Xudduntaani waa mid aad u cufan oo aan lahayn wakiilo xumbo leh sida aad ka heli doonto sagxadda dhaqanka ee WPC. Waxay ku siinaysaa waxoogaa adkaysi yar oo cagta hoosteeda ah, laakiin waxay ka dhigaysaa sagxadda dhulka inay noqoto superhero qaybta waawayn.
Lakabka Vinyl La daabacay: Tani waa meesha aad ka heleyso sawirradaada quruxda badan ee ka dhigaya muuqaalka vinyl (ku dhawaad) mid la mid ah agabyada dabiiciga ah sida dhagaxa iyo qoryaha. Badanaa, sagxadda vinylalkohol ee raaxada leh ee udub -dhexaadka ah waa vinyl -ka ugu tayada sarreeya suuqa. Tani waxay ka dhigan tahay inaad hesho muuqaalka ugu macquulsan ee dadku ku dhaaran doonaan inay yihiin alwaax/dhagax dhab ah!
Xiro Lakabka: Sida vinyl -dhaqameedka, lakabka duugga wuxuu la mid yahay ilaaliyahaaga; waxay kaa caawineysaa inaad ka ilaaliso sagxaddaada dillaacyada, xagashada, iwm. Lakabka duugga oo ka sii dhumuc weyn, ayaa kaydiya ilaaliyahaaga. Dabaqa SPC waxaa lagu yaqaanaa inuu leeyahay buundo, lakabka duugga hilibka lo'da oo bixiya ilaalin dheeraad ah. Markaad fiiriso sagxadda vinyl, waa sida (haddii aysan ka badnayn) muhiim inaad eegto dhumucda lakabka sida dhumucda looxa.
Alaabta SPC Guji Dhulka
Dhumucdiis 3.5mm, 4.0 mm, 4.5 mm, 5.0 mm, 5.5 mm, 6.0mm, loo habeeyay
Gacan -xire 0.1/0.15/0.3/0.5/0.7MM
Hoos -u -dhigid EVA/IXPE 1.0/1.5MM/2.0MM
Cabbirka: 7 "*48 '', 6"*36 '', 9 ''*60 '', 12*12*12*24,24*24, oo la habeeyay
Dharka Badarka Qoryaha/Midhaha Marble/Badarka Roogga
Dusha Embossor Iftiimin, Embossor Qoto dheer, Xoqin Gacan, Banaan, Saamayn.
Dammaanad Degaanka 20 Sanno, Ganacsi 15 Sano
Nidaamka qufulka Guji
Midabada In ka badan 3 hundrends .pls na weydii haddii aad rabto inaad aragto wax badan.
Hore: 4mm waterprooof spc sagxadda dhulka
Xiga: 5.0mm dab -damiye guji warshad sagxadda dhulka
5.0mm dab -damiye guji warshad sagxadda dhulka
PVC Mashiinka Goynta Vinyl Gogosha